အားလုံးဘတ်တဲ့ တီချမ်း: တွေးမိတာလေးတွေ…………
mgnge May 22, 2009 at 3:03 AM
တစ်ခုတော့ရှိတယ်... ကျွန်တော်တို့ စီမှာတော့ယဉ်ကျေးမှုတစ်ခုရှိတယ်..။ ကျွန်တော် ကျောင်းသွားနေကျ metro ဆိုရင် လူဘယ်လောက်ကြပ်ကြပ်..ကိုယ်
အပေါက်ဝရောက်နေရင် နောက်လူဝင်ဖို့ ...ဆင်းသူဆင်းနိုင်ဖို့ ခဏထွက် ပေးပါတယ် ပိတ်နေတဲ့သူက...။ နောက်တစ်ခု ထိုင်ခုံတွေမှာရေးထားတယ်. သက်
ကြီးရွယ်အို များနဲ့ မိန်း မများအတွက်တဲ့...။လူချောင်ရင်တော့ယောကျာင်္းတွေ လည်းထိုင်ပါတယ်..။ ဒါပေမယ့် တကယ်သက်ကြီးရွယ်အိုနဲ့ .. အမျိုးသမီးကြိး တွေ လာရင်ထပေးတတ်ကြတယ်...။ ဒါကျွန်တော်လေးစား တဲ့ဒီနိုင်ငံရဲ့အပြုအမု ပါ...။ ဘာရယ်မဟုတ် ဘူး
ကြုံတုန်းလေး အတွေ့ အကြုံဖလယ်တာပေ့ါဗျာ...။
အန်တီချမ်း May 22, 2009 at 3:14 AM
အန်တီချမ်း May 22, 2009 at 3:19 AM
အဲ့တာတွေ က ဒီမှာလဲ ရှိတယ် ငယ်ရဲ့
တီပြောချင်တာ က စည်းကမ်း က စည်းကမ်းပါ
လိုက်နာတဲ့လူတွေရဲ့တန်ဖိုးကသာ ပိုအဓိက ကျတယ်ဟုတ်
ဒီမှာ ဆို အဲ့ဒီ မိုးပျံရထား အထွက်ပေါက်ဝအတွက် စည်းအ၀ါနဲ့တောင် သပ်သပ်တားထားတာ ထွက်တဲ့လူတွေကို ဦးစားပေးဖို့ လေ
အဲ့တော့ တီကလဲ တိုက်ပစ်လိုက်တယ်လေ ခိခိခိ
စတာပါအေ ကျမ က ကြောက်တတ်တယ်တော့
moekhar May 22, 2009 at 7:12 AM
အဲဒီနားပေါက်ကျယ်ကြီးတွေပေါ့ .. မြင်ရတာ စိတ်ထဲတမျိုးကြီးပဲ .. ကြောက်တယ် .. အဲလောက်ကြီးလုပ်ထားတာ လှတယ်များထင်နေလားမသိဘူး .. ကြက်သီးထလိုက်တာ ..း(
Mae May 22, 2009 at 7:18 AM
နားပေါက်ကို အဲ့တာတွေ ဝတ်တာ ကြောက်တယ်၊
ပိတ်တာတော့ စင်္ကာပူမှာလဲ ဒီလိုပဲ၊ စိတ်တိုအောင်ကို တိုးကျိပ်ထွက်ရတာ၊ ပိုတိုလာရင် အော်ပစ်လိုက်တယ်၊ ဒီမှာတော့ လူတွေက အသိစိတ်ဓာတ်ပိုရှိသလိုပဲ၊ တကယ်ဆို အရှေ့ဘက်က ပိုယဉ်ကျေးတယ်လို ပြောကြတာနော်..
sweetpeony May 22, 2009 at 10:08 AM
ချင်းလူမျိုးတွေ ရဲ့ယဉ်ကျေးမှုကို အားကျတယ်ထင်ပါရဲ့။ နားပေါက်ကိုပြောပါတယ်။ ချင်းတွေက အဲလိုလုပ်တယ်လေ။ ပြီးတော့ နားတောင်းအကြီးကြီးတွေ ၀တ်တယ်။ သူတို့ကတော့ရိုးရာလေ..။ ဒါကို အားကျလို့နေမှာပေါ့။
သူများကတော့ ကြောက်တယ်။ အဲဒါမျိုးတွေကို...။
Mogok Thar May 22, 2009 at 10:37 AM
တီရေ.. ဒိနေ့မနက်ပဲ တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင် ရထားပျက်လို့ လူကျပ်ပီးးး ရုံးနောက်ကျ မှ
ပိတ်ဆို့တတ်သူများကတော့ နေရာတကာ ရှိလားမသိ။ သူတို့ကတော့ ရှေ့ကနေ သူတပါးကို ပိတ်ဖနမိတာ သိပုံတောင် မပေါ်။
တက်တူးတော့ ထိုးချင်သားဗျ။ နား၊ နှာခေါင်း၊ မျက်ခုံး၊ အါးစပ် ဘယ်နားမှာပဲ piearcing တွေ တပ်ထားထားဗျာ၊ (မိန်းခလေးတွေ နားကပ် ပန်တာကလွဲရင်) ကြည့် မတတ်ပါ။ ခောတ် နောက်ကျတယ် ပြောပြောဗျို့။
နွေးနေခြည် May 22, 2009 at 11:06 AM
ရထားစီးရင်တော့ ကြုံရတာပဲ ဒီမှာလဲ။ နောက်လူတမျိုးက ခြေထောက်ချိတ်ထိုင်ကြတာ။ မထိုင်နဲ့ မပြောပါဘူး ပိပိရိရိထိုင်ပေါ့ ခုတော့ စတိုင်ပေးပြီး ခြေထောက်ကြီးလေထဲမြောက်ချိတ် ထားတတ်တဲ့လူတွေကလည်း ရှိသေးတယ် တီရေ။ ရပ်တဲ့လူတွေကိုမှ အားမနာ...
ဆေးမှင်ကြောင်ကတော့ စိတ်ရူးပေါက်ရင် ကပ်ခွာလေးဝယ်ကပ်လိုက်ပေါ့း) မထိုးပါနဲ့ ကောင်းဘူး။
နန်းညီ May 22, 2009 at 12:57 PM
နားပေါက်ဆိုရင် ၆ ပေါက်လောက်နဲ့လူမှ ရွေးကြိုက်ထားတာ.. ငှဲငှဲ.. ကိုယ်တိုင်တော့မဖောက်ဘူး.. နာလို့..
တက်တူးကတော့ တစ်နေ့နေ့မှာ ထိုးဖြစ်အောင်ထိုးဦးမယ်.. ထိုးတတ်တဲ့လူနဲ့မှ တွဲနေတာကွ.. နောက် တငှဲ..
အန်တီချမ်း May 22, 2009 at 1:25 PM
ဒနည ရေ အဲ့ဒီနားပေါက် ၆ ပေါက် က အသည်း ၆ ခါကွဲဖူးတာ ကို ကိုယ်စားပြုလားမေးကြည့်ပါလား
တီလဲ ထိုးမယ် တက်တူးကို တင်ပဆုံနားမှာ
assex here လို့ ခိခိ
အကိုကာလသားတွေ ရင်ခုန်အောင် ခိခိ
ပြီးရင် ဘောင်းဘီ ချက်ပြုတ်ဝတ်မယ် ခိခိ
ပြီးရင် ဖင်ပေါ်အောင်ခဏခဏ ထိုင်ပြမယ်
နောက်တငှဲ ငှဲငှဲ ငှဲ..............
သဇင်ဏီ May 22, 2009 at 1:38 PM
တီတီ့ရေးပုံရေးနည်းလေး ပြောင်းထားတယ်နော်.. =)
အန်တီချမ်း May 22, 2009 at 2:18 PM
ရှင်က ရေးတဲ့အချိန် မှမကြည့်တာ
တီ စာ စရေးကာစ က ရေးထားတာလေးလေ
အရင်ဘလောခ်တင်ကာစ က တင်ဖူးတယ် ဘယ်သူမှမဖတ်ဘူး ခိခိ
ဘာလဲအရေးအသားက ယောက်ျားဆန်နေတယ် ပြောမလို့လား
ဗျာ ဗျာ ဗျ
wai May 22, 2009 at 4:10 PM
I usually wear2ear rings. The frist hole was done when my first love said that I am not "a gentleman". The second one was done when my professor said he doesn't hope so much from such outfit-crazy-guy (me). I just want to show that our appearance is not important and just deal with inside.
I wanna put fire flame tatto on my arm. But my career is kinda not suitable for such stuffs. Whenever I wander Khao San Road, I usually get the idea of tatto but like you, I am not dare to do it. Wishing, i gonna do it one day.
အန်တီချမ်း May 22, 2009 at 5:12 PM
ဖုန်းဆက်လေ တီ့ ကို
မနက်ဖြန်တောင် ခေါက်ဆန် နားက သူခိုးဈေးသွားမလို့
Mae May 22, 2009 at 10:07 PM
တို့လဲ နားမှာ လေးပေါက်.. နှစ်ပေါက်က မိဘနဲ့ ရည်းစားနဲ့ ဝတ်ခိုင်းတာ ဝတ်ရလို့ ကိုယ်ဝတ်ချင်တာလဲ ဝတ်လို့ရအောင် လေးပေါက်..
Tattoo ထိုးချင်တယ်၊ သတ္တိမရှိဘူး၊ အသတ်ခံရမယ်လို့လဲ အထက်ပါလူကြီးများက ကြိမ်းမောင်းထားတယ်.. ခါးနားမှာ ပန်းခက်လေးလို ထိုးချင်တယ်
အန်တီချမ်း May 23, 2009 at 11:31 AM
ဒေါ်မေး ရေ တက်တူးကိစ္စက
ဂွတ်တယ်ထင်ရင် ဒူးသာဒူး (အဟိ မြှောက်ပေးတာနော်)
ပြီးတော့ ကိုယ့် ကိုယ်ပေါ်မှာကိုယ်ထိုးတာ
နောက်တခုက ခုန ပြောတဲ့ ထိုးချင်တဲ့နေရာကလဲ
ပရိုက်ဗိတ်ပတ် လစ်မစ်တက်အက်ဆက် ပဲလေ နော် လုပ်လုပ်
သီဟသစ် May 23, 2009 at 9:20 PM
နန်းညီ May 26, 2009 at 5:43 PM
အသည်းကွဲတာကို ကိုယ်စားပြုတာ မဟုတ်ဘူးတဲ့